မေး​ထား​တာ​လေး​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​လတ်​တ​လော ​မေး​ထား​တာ​လေး​တွေ​ပါ . konyinaymin@gmail.com ​ထဲ​က ​မေးလ်​တွေ​က​တော့ ​ပြန်​ယူ​လို့ ​မ​ရ​နိုင်​တော့​တဲ့​အ​တွက် ​မ​ဖြေ​ပေး​နိုင်​တော့​တာ​ကို ​စိတ်​မ​ကောင်း​ပါ​ဘူး .
​မေးးmyomin zaw : ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ဗျာ။ ​ဘယ်​လို​ပြော​ရ​မှန်း​မ​သိ​တာ​နဲ့ ​ဒီ​က​ပဲ reply ​နဲ့​ပြော​ရ​တော့​မှာ​ပဲ။ ​ကျွန်​တော် kaspersky key ​တွေ​လစ်​ကုန်​လို့
​ဖြေ : ​ကျွန်​တော့် ​ဝဘ်​ဆိုက်​ရဲ့ ​ညာ​ဖက်​ခြမ်း​မှာ ​ကီး​အ​သစ်​များ​လို​ချင်​လျှင် ​ဒီ​ကို​နှိပ်​ပါ ​ဆို​တဲ့ ​အ​ကွက်​ရှိ​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ပုံ​လေး​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ Download ​လုပ်​ဖို့ ​ကီး​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်.
​မေးးfatherson 87 ; ​ကျွန်​တော်. ​စက်​က blue screen ​တက်​ပြီး​တော. restart ​ကျ​ကျ​သွား​တယ်.....​အဲ​ဒါ​ကို​ဘယ်​လို ​ဖြေ​ရှင်း​ရ​မ​လဲ
​ဖြေးRam error ​ကြောင့်​ဖြစ်​မယ်​ထင်​ပါ​တယ် ​အစ်​ကို​တပ်​ထား​တဲ့ Ram ​ကို​ပြန်​ဖြုတ်​လိုက်​ပါ​ပြီး​တာ​နဲ့ Ram ​ရဲ့​အောက်​က ​ကြေး​ဝါ​ရောင်​လေး​တွေ​ကို ​ခဲ​ဖျက်​နဲ့ ​ပြောင်​လာ​အောင် ​တိုက်​ပြီး​တော့ ​ပြန်​တပ်​လိုက်​ပါ. ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင် ​ဆက်​ပြော​ပါ ​ကျွန်​တော် ​နောက်​တစ်​နည်း​ပြော​ပြ​ပါ​ဦး​မယ် .
Bugyi October 9, 2010 at 12:01 PM
​ကို​ညီ ​ကျွန်​တော့ ​မှာ​လေ ​ကေ​ပါ​စ​ကိုက်​က keyblock ​ဖြစ်​နေ​တယ် ​နဲ​နဲ ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​လား ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ​လို
naing lin October 9, 2010 at 7:48 PM
​အ​ကို​ရေ ​ကျွန်​တော်​အ​ကို့ ​ရဲ့ ​ဆိုဒ်​လေး​ကို​အ​မြဲ​လို​လို​လာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်၊​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ဘာ​မှေ​တာ့​မ​တောင်း​ဆို​ဘူး​ပါ​ဘူး၊​အ​ခု​တော့ ​တောင်း​စ​ရာ
​စိတ်​ဝင်​စား​လို့ ၊​အဲ​ဒါ​က software ​ရှိ​လား​မ​သိ​ဘူး၊​ရှိ​ရင်